Dhiirrigelinta weyn ee Sinterklaas: yaab yaab leh oo qurux badan ayaa la duubay! : Martin Vrijland
Dhiirrigelinta weyn ee Sinterklaas: yaab yaab leh oo qurux badan ayaa la duubay!
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 30 November 2019	• 10 Comments
Waxay u dhowdahay Sinterklaas, oo ah xafladda carruurta dhabta ah iyo xaflad la yaab leh. Waxyaabahaas la yaabka leh ayaa si qurux badan loo soo diyaariyey oo caadiyan noo ah qiimo wanaagsan. Arrinta carruurteenna, waan ku faraxsanahay inaan lacag bixinno, laakiin waxyaabaha la yaabka leh ee ka soo kordha gobolka Sinterklaas ayaa ah sida ugu wanaagsan oo loogu soo xiray daboolno qurux badan waxayna naga qaalisan yihiin lacag badan. Waxaan ku baranay da 'yarta inay rumaystaan ​​khuraafaadka iyo wararka Saint Nicholas waxay bilaabayaan inay bartaan dhagaha yar yari horaantiisii ​​halyeeyada la abuuray ee caawiyayaashu.
Waxaan dhahay 'pieten', maxaa yeelay wadahadalka 'Zwarte Piet' wuxuu hormuud u yahay khudbadda dhexdhexaadnimada ee soo socota heer Yurub oo la xiriiri doonta takoorka. Ma aha oo keliya takoorista ka dhanka ah madow, laakiin sidoo kale takoorista LGBTI, oo H ee hetero uusan ka dhicin (H wuxuu u taagan yahay khaniis ahaan). Marka la soo koobo, dooddii Zwarte Piet waxay ku salaysnayd ku-tiirsanaanta sharciga takooridda iyo in garsoorayaasha garoonku ay diraan tilmaan tilmaameysa jihada ay bulshada ku hoggaaminayso: kaamirooyinka caqliga leh ee kormeera ama ku takooro. Marka hore gudaha garoonka; laakiin la soco sida dhaqsaha leh taasi u dhici doonto dibedda garoonka (akhri halkan).
Waxaan si dhaqso leh loogu diyaargaroobayaa dowlad guud oo kontaroolo, taas oo hadalkaasi sidoo kale lagula socon doono. Hadaad tiraahdid sir ama madam mustaqbalka ama aad ereyo u isticmaasho awood ahaan, markaa adigu waxaad tahay bobbin waxaadna ka heli doontaa qoraal aan fiicnayn buugga weyn ee Sinterklaas, kaas oo isha ku hayn doona dhaqanka qof walba. Ma aha oo kaliya midabka maqaarka. Sidoo kale waa iyo waxkasta oo ku saabsan soo bandhigida hadalka dhexdhexaadnimada jinsi. Laakiin badiyaa waan hilmaamnaa in sharci ama cabir ay iibiyeen joornaalka Sinterklaas sida A, laakiin sidoo kale quseeyo B.
Haddii dhaqanku si xad dhaaf ah u dhaafo, ma heli doontid wax hadiyado ah waxaana lagaa saari doonaa taleefannada huwada leh ee ka daadiya qiiq-qubka bulshada Holland dhammaan wasakhda waxyaalaha qariya. Sinterklaas waa inay dabcan wali haysataa warqad baaris ama warqad warqad ah oo ka socota xeerilaaliyaha guud si loogu oggolaado inuu soo galo, laakiin nasiib wanaag sheekada sheeko-abuurka ayaa curisay sheeko nin si buuxda ugu noolaa adduunka dibadiisa isla markaana faraxumeeyay caruurtiisa, ku dhejiyay cunsuriyadda reer Austria. Saqafka dushiisa oo ay lahaayeen dhammaan qollo qarsoon oo ku yaal bannaanka oo u muuqda mid cimilo-cabbirkiisu yahay! Qoyskaas cirfiidka ah, aabihii ugu horreeyay, astaamaha cirfiidka, sheekada wargeysyada sheekada, baahida loo qabo warqadda baarista ayaa lagu wiiqay hal dhicitaan. Caanleyda kuma buuqdo. The fabeltjekrant waxay keeni karaan wax walba sidii inay yihiin waxa ugu badan adduunka.
Albaabkaaga hore ma aha muqaddas hadda wixii ka dambeeya. Sinterklaas kaliya ayaa la imaan kara addoonkiisii.
Nasiib wanaagse, Saint Nicholas wuxuu umuuqdaa mid xur ah oo waxyaabihiisa la yaabka leh ay had iyo jeer si quruxsan u diyaarsan yihiin. Caruurta wanaagsan wax kama arkaan dhinaciisa xun. Qaybtaas sheekada, oo ah meesha caruurta loo geeyay Spain boorsada Saint, ayaa barafku hoosta kaga jiraa doodaha ku saabsan dhaqanka, laakiin runtii waa iska leh.
Waalidku waxay u isticmaalaan hanjabaadda inay carruurta ugu sheegaan: Gfadlan, haddii kale ma heli doontid wax shukulaato ama tooy sanadkan Sinterklaas. Marka waa runtii waa xisbi waxbarasho, in xisbiga Sinterklaas. Qaybta 'bacda Sinterklaas' waxaa loogu talagalay qof kasta oo mararka qaarkood jiida gadhka Saint Nicholas oo dhahaya waa been abuur. Kasoo qaadashada boorsada Sinterklaas (wiilasha maxay madax u yihiin) waxaa buuxiya sharciga ku xeeran (oo aan la cafin ama si qalqallooc leh loo marin) sharciga ku xeeran gelitaanka qasabka ah ee GGZ. Sharcigaas, oo ay weheliso cabirka 'Ruinerwold' (kuwa wax cadaaweyaasha ah ayaa kusoo duulaya guri kasta oo aan la haysan amar maxkamadeed), waxay xaqiijineysaa in dadka laga yaabo inay ku soo bandhigaan dhaqan aan caadi ahayn boorsada Sinterklaas lagu qaadi karo Spain. Ka dib ku beddelo 'Spain' xarun 'rugta caafimaadka dhimirka', oo ku duubnaan daryeelka wanaagsan.
Markaad tahay cunugga gobolka Sinterklaas, haddii aad hayso fikrado kala duwan oo ku saabsan dhammaan jiidooyinkaas oo u sheegaya cunuggaaga dugsiga hoose in ay ku dhasheen dhexdhexaadnimada jinsiga oo ay wali dooran karaan jinsigooda, markaa waxaad u baahan tahay xoogaa waxbarasho ah. Miyaad raacaysaa Wax xanuun ah ma leh haddii aadan halgan.
Ma xasuusataa sheekooyinka joornaalka Sinterklaas iyo joornaalkii sheekha ee nin jah wareersan ku dilay wasiirkii hore Els Borst? Kaliya waxba! Ma xusuusataa sheekooyinka dadka jah wareersan ee geysta nooc kasta oo dil iyo kufsi ah. Taasi waxay ku jirtay dhammaan joornaalka, wargeyska khuraafaadka, wargeyska khuraafaadka. Waxay si sax ah u sheegtaa khuraafaadka aad tiriso. Haddii aad xoogaa caasi ku tahay fikradaha Saint, waxaa suuragal ah inaad jahwareer badan gasho. Kaalay, dhib ma leh.
Sidoo kale waxaa jira dhammaan argagixisada Fiese oo u hanjabaya Sinterklaas iyo caawiyayaashiisa. Sinterklaas waxay dhahday iyaguna way ku hanjabeen. Wuxuu taas ku muujiyay joornaalka Sinterklaas iyo joornaalka khuraafaadka. Gobolka Sinterklaas wuxuu doonayaa inuu kaa difaaco argagaxisadaas sidaa darteedna wuxuu adeegsadaa caawiyayaal badan si looga hortago inay xumaato. Xarigaha sootaboolku waxay leeyihiin habab nooc kasta ah si ay uga hortagaan xitaa murugada ka dhalan karta oo sidaas darteed Saint ayaa laga yaabaa inay ogaadaan waxkasta oo adiga kugu saabsan. Taas ayaa markaa ku jirta buugga weyn ee gobolka "Sinterklaas".
Taasi waxkasta way hagaagsan yihiin maalmahan. Kahor intaas, Santa Claus wuxuu ku leeyahay dhammaan kumbuyuutarrada xogta waaweyn ee Spain oo riixaya dhammaan dareemayaasha gurigaaga iyo taleefankaaga, PC-ga iyo smartwatch. Sidan ayaa Saint ay u arki kartaa si dhab ah cidda halista tahay iyo cidda gashanaysa bacda. Who is is is is is is is is who is who is who who is Kii macaan lahu waa macaan yahay, oo nacasnimadiisu waa roon. Nalalka sootagu waxay diyaar u yihiin tiro aad u badan inay kaa saaraan bulshada. Sababtoo ah inkasta oo xaqiiqda ah in Sinterklaas uu ku dhawaaqo inuu yahay mid gaaban, waxaan aragnaa cillad kuleyl ah oo ku yaal gees kasta oo dariiqa ah gacmo nadiif ah. Ka dibna waxaa sidoo kale jira kooxo badan oo caawiyayaal ah gudaha Spainna Saint waxay leedahay caawiyayaal fara badan oo diyaar u ah inay koriyaan carruurta lagu soo qaatay boorsada.
Sinterklaasje kaliya soo gal anigoo addoonkaaga ah, maxaa yeelay kulligeen waan toosnaa.
'The greatfake' ghost ghost 'PsyOp oo ah ka qaadista xorriyaddaada oo dhan iyo hordhaca' booliiska fikirka '(qaybta 3)
Kaamirooyinka casriga ah ee garoomada kubbadda cagta ayaa ka horeeya nidaamka nidaamka dhibcaha Shiinaha?
AIVD ayaa mar kale ka hortagtay weerar argaggixiso, ayaa sheegaya in AIVD iyo warbaahinta ay iibinayaan bandhigga
Magaalooyinka caqliga, xabsiga dijitaalka ah waxaa lagu hirgeliyaa adiga oo aan ogaanin
Tags: takoorid, wadahadal, featured, cillad soot, Sinterklaas, madow
30 November 2019 ee 16: 02
Sinterklaas?! waa wixii la soo dhaafay, waa cunsur dhexdhexaad ah jinsi ku takhasusay jinsi la yiraahdo St Pedofilius oo aan weli lagu dhawaaqin meel qalaad oo wejigiisa rinjiyeystay iyo waardiyeyaal argagax geliya madurodam iyo halka carruurta lagu qasbay inay fadhiistaan ​​dhabarkooda. Haa si xawli ah ayey uga dhacday Madurodam iyo hareeraheeda
30 November 2019 ee 16: 23
Hagaag, maxaa ka khaldan arintaas? Miyaanay fiicnayn in loo oggolaado carruurtaadu inay la qabsadaan bulshada cusub ee qaanso-roobaadka? Waxaan dhowaan lahaan doonnaa mawjad ballaadhan oo udub dhexaadka jinsi ah, sidaa daraadeed sifiican ayaan uga baranaynaa.
Waalidku waa inay akhriyaan buuggayga ... Waxaan si kooban u sharraxaa waxyaabaha soo socda:
Daraasad qoto dheer (qodobbada halkaan ku yaal barta) waxay ku baraysaa in transgenderism-ka kaliya uusan u horseedi doonin dhalmo iyo waxbarasho labadaba in ay aad ugu sii gudbaan gobolka (Brave New World, Aldous Huxley), laakiin sidoo kale tani waa bogga hore. transhumanism. Labaduba waxay kujiraan ereyga "trans" ee erayga badalashada. Amarka adduunka Luciferian uma aha oo keliya inuu u halgamo ninka aan dhiman karin (miyaad u aqoonsan tahay diimaha iyo "noloshooda weligeed ah"?), Laakiin sidoo kale waxay isku dayeysaa inay nin u beddesho cyborgs. Taasi waa uun bilow, maxaa yeelay hadafka ugu dambeeya ayaa ah Singularity. Taasi waa ereyga ay xilsaareen sarkaalka sare ee farsamada Google, abuuraha, qoraa iyo maalgashade caalami ah iyo dhiirrigeliyaha transhumanism: Ray Kurzweil. Kaliilku waa iskudhaafkii maskaxda bini aadamka oo leh sirdoon macmal ah (daruur dabcan).
Markaa haddii aad hadda tahay qof furfuran oo "maskax ka madaxbanaan" inaad ku qanciso dhexdhexaadnimada jinsiga iyo xitaa inaad si miyir qabta ama miyir qabta u dhiirrigeliso isbeddelka, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaadan dooneynin in laguugu magacdho muxaafid isla markaana aad markasta safka hore kaga jirto horumarka, markaa tixgeli in tani ay tahay kaliya albaabka loo maro addoonsiga kama dambaysta ah ee dadka maskaxda ku qaba iyo kuwa jidh ahaaneed leh ee nanotechnologia loo beddelay ay tahay inay internet ka yimaadaan (transhender transhuman). Hawshaasi waa mid tartiib-tartiib ah, laakiin dacaayadda ayaa durba shaqadeeda si wanaagsan u qabaneysa. Dhex-dhexaadka transgender / jinsi waa bilowga. Tallaabooyinka xiga waa isku xirka maskaxda ee leh internetka (Elon Musk's Neuralink tusaale ahaan) iyo duulaankii nanobot ee jirka. Intaa waxaa sii dheer, waa mid aad u faa'iido leh haddii qof walba DNA-ga uu ku jiro keydka macluumaadka adduunka oo dhan iyo sharciga tallaalku wuxuu hubiyaa in qof walba uu aqbalo mudista. Hababka dib-u-habeynta hidda-socodka ee ku saleysan habka CRISPR-CAS12 ayaa markaa laga xakamayn karaa daruuraha. Gobolka ayaa markaa ku hagaajin kara DNA-gaaga khadka tooska ah.
Waxaa fiican inaad fahamto inaad sidoo kale u malaynayso ragga iyo dumarka inay siman yihiin. Sidoo kale waa la fahmi karaa haddii aad fahamto carruurta ku dhex jira dhibaatooyinka lamaanaha. Hadda waa waqti dhab ah oo la arko in tani aysan ahayn arrin faham, laakiin waxaanu la tacaalaynaa dacaayad adag. Diidmadaas weli waxay noqonaysaa mid aan waxba galabsan haddii aadan arag wax waxa soo socda. Waxaan dhab ahaan ku dhejin karnaa qabrigeena ku wajahan addoonsiga digital-ka ah.
Haddii aad dhibaatada u qaadato oo runti naftaada ku dhex gasho, waxaa laga yaabaa inaad garato inay sidoo kale waxtar leedahay inaad buuggayga la wadaagto qoyskaaga, asxaabtaada ama kuwa aad is garatid.
3 December 2019 ee 23: 54
salmon tareenkaaga fikirka ah maahan mid waalan ..
30 November 2019 ee 16: 31
30 November 2019 ee 16: 57
Muxuu YouTube wali u mamnuucin fiidiyowyadan weli? Ama waa in dib loogu dhajiyaa 'soot wipe'.
Siday tahay, anigu waxaan si buuxda ugu qanacsanahay joojinta Zwarte Piet, laakiin hanjabaada loo haysto boorsada Sinterklaas lama tirtirin. Dadyahow ragow maxaa taliye ah ..
30 November 2019 ee 18: 04
Waxaan waligey jeclaa Sinterklaas iyo piwa Zwarte markaan dugsiga hoose ku jiray. Jawiga, dharka, midabka lagu sawiray, waxyaabaha la yaab leh, waxay ahaayeen uun madadaalo dugsiga. Wax aan jirin laakiin aan ku xirnayn cunsuriyadda.
Arrinta Zwarte Piet ayaa wiilashu u adeegsadeen inay bulshada dhexgalaan. Wiilashu walaac kama muujinayaan ilaalinta dadka madow. Duuliyaha Zwarte ayaa tusaale uun u ah aalad loo adeegsado injineeriyadda bulshada. Wax intaa ka badan oo aan ka yarayn. Mar labaad ka fikir cidda ka dambeysa dadkaas madowga ah ee asalka u soo dirta mudaaharaadka oo u dir maamuleyaasha / wareejinta dhakhaatiirta dadka madow. Haa, dabcan, wiilasha. Waa macquul in dadka madowga ahi aysan taas arkin. Kuwa soo jiidaa ugu dheer marwalba waa wiilasha. Kumaa wiilasha diiradda saari doona kadib 'arrinta cadaabta'? Wali waa mashquul bees, shaqsiyaadkaas wanaagsan, iyo nimankaas.
30 November 2019 ee 17: 16
Maxaa runtii ku dhacaya dhammaan cashuurtii Sinterklaas ee cashuurta laga qaado? Ameriko ma cuni kartaa xididdadaas oo dhan? Maya, ninku jikada wuxuu ka sameeyaa karooto karooto macaan ah taas.
3 December 2019 ee 11: 43
Pigment waa bunni! soot waa ergo madow ma jiraan "dad madow" mana jiro hal nooc oo ah Homo sapiens?
5 December 2019 ee 01: 42
Dhageyso yaa carruurta halkaas jooga
"Awoodda ficillada sharci fulinta, gaar ahaan kormeerka fog ama bay'adaha khatarta leh."
« Kaamirooyinka casriga ah ee garoomada kubbadda cagta ayaa ka horeeya nidaamka nidaamka dhibcaha Shiinaha?
Rutger Bregman wuxuu ku baaqay in la sameeyo nidaam dawladeed oo fallaagoobay UN-ka »
Guud ahaan Wadarta: 15.973.210
Fayraska corona ('Wuhan virus') wuxuu leeyahay rukhsad Ingiriis ah: lambar EP3172319B1
Dhalinta maanta waxay rabaan inay ka buuxiyaan xerooyinka dib-u-barashada (gulags) kuwa diida cimilada
Coronavirus ka soo jeeda Shiinaha ayaa bixisa albibilkii ugu fiicnaa ee waajibaadka tallaalka ee adduunka oo dhan
Martin Vrijland op Fayraska corona ('Wuhan virus') wuxuu leeyahay rukhsad Ingiriis ah: lambar EP3172319B1
SalmonInClick op Fayraska corona ('Wuhan virus') wuxuu leeyahay rukhsad Ingiriis ah: lambar EP3172319B1
SandinG op Fayraska corona ('Wuhan virus') wuxuu leeyahay rukhsad Ingiriis ah: lambar EP3172319B1